फेला पर्यो तीन आँखे नाग देवता भेटि स्वरुप एक सेयर गरौ २४ घन्टामा राम्रो हुने छ देखेरानी नदेखे जस्तो नगर्नुहोला हेर्नुस तस्वीर सहित – MeroOnline Khabar
फेला पर्यो तीन आँखे नाग देवता भेटि स्वरुप एक सेयर गरौ २४ घन्टामा राम्रो हुने छ देखेरानी नदेखे जस्तो नगर्नुहोला हेर्नुस तस्वीर सहित
काठमाडौं/एजेन्सी । अष्ट्रेलियाका बन्यजन्तु अधिकारीले केही दिन अघि फेला परेको तीन आँखे सर्पको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् । ‘नोर्दन टेरिटोरी पार्क एन्ड वाइल्डलाइफ सर्भिस’ले इन्टरनेटमार्फत सार्वजनिक गरेको तीन आँखे सर्पलाई अद्भूत मानिएको छ ।
पन्ध्र इन्च लामो सर्पलाई अनौठो टाउकोका कारण खान समस्या परेको बताइएको थियो । सर्पको एक्सरे गर्दा दुईटा टाउको भने नजोडिएको देखिएको थियो । एउटै टाउकोमा रहेका तीन वटै आँखा देख्न सक्ने थियो । Sources by:news24nepal
रगत को नाता भनेको यस्तो हुनुपर्छ जसले आफ्नो भाइको ७.७ कडोर डलर ऋण तिरिदिए र भाइ जेलजान बाट जोगीए :- काठमान्डू साच्चिकै रगतको नाता भनेको एस्तो हुनुपर्छ भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी ले आफ्नो भाइको ७.७ करोड डलर ऋण तिरिदिए का छन् ! ऋणमा डुबेका अम्बानी का भाइ लाइ सहयोग को खाँचो थियो त्यो ठुलो सहयोग आफ्नै दाजु ले गरेका छन् ! र मुकेश अम्बानीका भाइ जेल जान बाट पनि बेचेका छन् ! उनले यो ऋण नतिरेको भए उनि जेल बस्नु पर्थ्यो तर उनका दाइले त्यो सबै ऋण तिरिदिएपछि उनि ऋण बाट मुक्त भएका छन् ! जे जस्तो भएपनि रगतको नाता भनेको रगतकै हुन्छ भन्ने प्रमाणित आज यी दाजुभाइले गराएका छन् !
अनिलले स्वीडेनको एरिक्सन कम्पनीलाई मंगलबारसम्म ८० मिलियन डलर तिर्नुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेशबाट बाबजुद उनले रकम तिर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा उनी जेल जाने खतरा थियो ।अन्तिम समयमा मुकेशले भाइलाई बचाएका छन् । अनिलले वक्तव्य जारी गर्दै दाइ मुकेश र भाउजू नीता अम्बानीलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कठिन घडीमा मैले परिवारको सहयोग पाएँ । यसले हाम्रो परिवारको बलियो मूल्य-मान्यतालाई दर्शाउँछ । जुन समय मलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता थियो, मेरो परिवार साथमा रह्यो ।’एक समय मुकेश र अनिलको सम्बन्ध राम्रो थिएन । दुवै एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी जस्ता देखिएका थिए । अनिलले भनेका छन्, ‘म र मेरो परिवार यसका लागि आभारी छौं कि हामी अतीतबाट निस्कियौं । यो सहयोगका लागि हृदयदेखि आभार ।’
ल्लाको मुसिकोट नगरपालिका ६ कुर्घामा रहेको मालिका मन्दिर जिल्लाकै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रकै रुपमा प्रसिद्ध मानिने गरेको छ । मालिकादेवीको दर्शन गर्न जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट तथा छिमेकी जिल्ला बाग्लुङ्ग, अघाखाँची लगायतका स्थानहरुबाट हजारौ दर्शनार्थीहरु मालिकामा आएर चिच्याएर बर माग्ने गर्दछन् । आफ्नो मनाकाङ्क्षा पुरा हुने धार्मिक जनविश्वासका साथ मन्दिरको दर्शन गर्ने र भाकल चढाउन मालिकामा भक्तजनको घुइचो लागेको हो
जानकारहरुका अनुसार धेरै पहिले चुरे पर्वत बर्षाका कारण खिईदा चुन, कोईला र गन्धकले भरिएको पहाडले विभिन्न आकृतिको रुपमा लिएको हो । हाल जति बर्षा भएपनि माटोका मसिना माटोका आकास तर्फ फर्केका विभिन्न आकृतिका थुम्कामा कुनै असर नपर्ने गरेको स्थानियको भनाई रहेको छ । यस क्षेत्रमा विसं २०२५ साल देखि बस्ती बस्न शुरु भएपछि पहाडका आकृति हाल जुन अबस्थामा छन त्यही अबस्थामा पहिलेपनि देखेको बुढापाकाहरु बताउद छ ।
बेदकोट नगरपालिकाले लिंगा र बेदकोट ताललाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सुरु गरेको छ । लिङ्गाको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दोस्रो नगरसभा लिंगामै गरिएको थियो । बेदकोटका नगर प्रमुख अशोककुमार चन्दले लिङ्गाको धार्मिक पर्यटकीय विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए । ‘लिङ्गा र बेदकोटलाई एकआपसमा जोडेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना छ,’ नगर प्रमुख चन्दले भने, ‘यसका लागि गुरुयोजना बनाएर जान्छौं
२.मुलाको पात: मुलाको पातमा भिटामिन A, B र C पाइन्छ। यसमा अधिक मात्रामा फाइबर हुने भएकोले यसले हाम्रो पाचनलाई राम्रो बनाउँछ र लिवरको कार्य क्षमतालाई पनि बढाउँछ। यसको लागि मुलाको पातलाई राम्ररी पखालेर जुस बनाउने। यो जुसलाई हरेक दिन खाना खाए पछी पिउने। यो जुस लगातार ६/७ दिन सम्म पिउनले लिवरसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरुलाई हटाउँछ।
३.केही नखाँदा पनि गनाएको जस्तो हुने, हरेक कुरामा गनाएको आभास हुने, वाकवाकी तथा वान्ता नै आयो भने पनि तपाईं गर्भवती हुनुभएको थाहा पाउन सकिन्छ । ४. दिक्क लाग्ने, दिशापिसाव लागेजस्तो हुने तर नलाग्ने, मुड परिवर्तन भइरहने अर्थात घरी रिस उठ्ने घरी शान्त रहन मन लाग्छ ।
← गुल्मीमा अचम्म भो ! ६६ बर्षका वृद्धली २७ वर्षे युवती टप्काए… युबतिको काहनी अझै रमाइलो …पूरा हेर्नुहोस
नेपाल आइडलकी मेनुका पौडेलले आफ्नो बिहेबारे पहिलो पटक मुख खोलिन →
प्रेम गीत ३ मा बोलामायाकी मोडल अन्जली अधिकारी नायिकामा! प्रदिप खड्का संग सुहाउला जोडी?हेर्नुहोस कुराकानी
विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित देश, जहाँ कुनै अपराध नै हुदैन, पुलिस कसलाई भन्छ भन्ने समेत थाहा छैन यहाका मानिसहरुलाई !